NguRobert DeVoe I-Cryptocurrency ineengxaki ezinzulu. Nsuku zonke, amanethiwekhi afana neBitcoin kunye neLitecoin ahlala ephakathi. Ukusebenza kwemigodi echanekileyo yezoshishino ezitshisa ngombane zibeke amandla okulawula amanethiwekhi ezandleni ezimbalwa. Abavukuzi...
Sibonga ngokukhethekileyo kwi-PIVian turtleflax ekulungiseleleni le mpendulo esemthethweni. NgoJuni 1, ngo-2018, uJoël Valenzuela wakhicilela eli nqaku kwiDashForceNews malunga nokunikezelwa kwemali ye-crypto, ukuhanjiswa kwabo, kunye neempembelelo zabo. Ukufuna...
Kunzima ukuqhubeka kunye neendawo ezininzi ezihambayo zentlangano egunyazisiweyo, ngokukodwa ngokufikelela kwehlabathi njengePIVX. LoMeyi wawungumyanga oxakeke kakhulu kwi-PIVX, kunye neendaba ezivela kwimpumelelo yokuqala yezobugcisa kwizahlulo ezahlukileyo zoluhlu....
I-Crypto Lark yayinomdla-ndlebe olandelayo emva kokuba u-“Snappy” uBryan Doreian wasePIVX ukuxoxa ngeendaba zakutsha ezivela kwi-PIVX, ukuhlaselwa kwe-51%, ukukhutshwa kwemali yobumfihlo, ukukhushulwa kwemali yecala, kunye nokunye okuningi! Ngenjongo...
Umsunguli we-PIVX kwi-Raffle Off Five I-PIVX Cruise 2019 Iikiti
Umsunguli we-PIVX s3v3nh4cks ukuze ahlasele amahlanu amabhankoni ahlala kwindawo ezimbini kwi-February 2019 ye-PIVX Cruise eya kunikwa ngo-Oktobha 2018. Iyintoni i-PIVX Cruise? Eli thuba elifanelekileyo lokuhlangana nabantu basePIVX! Abaya kwii-Cruise baya kuphuhlisa...
Iqela le-PIVX liyayiphakamisa
Hayi kukho wonke umntu, @FusedHelios apha. Ndineendaba ezimnandi. Izinto ezimbalwa ngokwenene. Izinto zokuqala kuqala, sizongeze zonke iividiyo zethu kwisitya esitsha se-Facebook esingasifumana apha: https://www.facebook.com/PIVXClass Plus sinayo i-akhawunti entsha...